Andron’ny Fahafahana ao Trinidad & Tobago — fa tena afaka tokoa ve aloha ilay firenena e? · Global Voices teny Malagasy
Olompirenena mandinika izay vato misakana ny tena atao hoe fahafahana
Voadika ny 06 Aogositra 2019 12:10 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Italiano, русский, Yorùbá, Español, Português, Ελληνικά, English
Sarivongan'ny Hiram-Panavotana, Kianjan'ny Fahafahana, Jamaika. Sary an'i Mark Franco, nahazoana alàlana.
Ankalazaina any amin'ny faritra maro ao Karaiba ho toy ny Andron'ny Fahafahana ny 1 Aogositra, manamarika ny fanafahana ireo Afrikàna nandevozina sy niharan'ny varotra andevo niampita ny ranomasimbe atlantika.
Trinidad sy Tobago no firenena voalohany indrindra teto an-tany nanambara ny fametrahana andro iray tsy fiasàna hanamarihana ny nanafoanana ny fanandevozana, saingy 34 taona taorian'ny nametrahana izay andro voalohany tsy iasàn'ny rehetra izay, ary 185 taona taorian'ny nampanan-kery ilay Lalàna voalohany nanafoana ny Fanandevozana, mbola mitohy ny adihevitra goavana momba ny hoe tena afaka tokoa ve sa tsia ity repoblika nosy-kambana ity.
Raha resahana ny momba ilay olan'ny 27 Jolay 2019, nanamarika ny praiminisitra Dr. Keith Rowley fa ao anatin'ireo vahoaka mifangaroharo ao Trinidad sy Tobago, “tsy mihetsika araka izay nandrasantsika taminy” ireo olona manana fiaviana afrikàna. Nolazain'i Rowley fa tokony hanainga fanahy ny olompirenena “hifantoka, hisaintsaina ary hiresaka amin'ny fomba tena matotra momba ny toedraharaha misy antsika amin'ny maha-firenena antsika” ny haavo tsy mitsahatra mitombo misy ny herisetra izay ampahany amin'ny fiainan'ireo tanora mainty hoditra sy tandrenivohitra”.
Niaiky ny filohan'ny Kaomity Mpanohana ny Fanafahana, Khafra Khambon, .
Ireo taratasy vitsivitsy nalefa ho an'ny toniandahatsoratra dia nanome ohatra maromaro amin'ny fanandevozana maoderina mba ho entina manaiky fa tena mbola lavitra tokoa ny tena fahafahana marina, raha ny hafa indray niezaka ny nanararaotra ilay fotoana mba hiresahana politika, tamin'ny fanakianana ireo tolotra sosialy sy kolontsainan'ny “fanoloran-tànana (fanampiana)”
Nosafidian'ny Trinidad Express ny hanasongadina fomba fijery iray momba ny Andron'ny Fahafahana, izay manosoka hevitra hoe diso ry Rowley, Kambon, ary ilay mpikatroka Pearl Eintou Springer momba ny antony tsy ahavitan'ireo Afro-Trinbagoniana sasany zavatra be loatra:
Ho an'ny vondrona iray mifehy dia mora ny mamorona rafitra iray manavakavaka sy mangeja. Ireo izay tsy milahatra amin'izay rafitra izay dia sokajiana ho tsy mahavita azy sy ampidinina ho anatin'ny saranga faharoa na ny ratsy noho izany aza. […]
Maro amin'ireo rafitra eto amintsika, ny fanabeazana ireo mpitarika, no mametraka tsy an-drariny ny vahoaka ho anaty saranga iray tsy avela hanam-bintana velively. Ny rafitra tsirairay dia manana ny fampilaharany ary arakaraky ny analavitany ny tendro no maha-ambany be ny laharana misy ny saranga iray. Ireo izay any amin'ny faran'ny laharana dia manana fahasahiranana be tokoa amin'ny fiatrehana ireo rafitra nakarina ho ambony kokoa. Kely ny fahatokisantenan-dry zareo ary ny fahakiviana hita eny amin'izy ireo dia afaka mihitsy hanosika azy ireo hiditra amin'ny fampiasàna herisetra mba hanoherana ny fangejàna.
Ilay mpanadihady Arthur Dash dia nipao-tsatroka tamin'ny “tantara miavaky ny fahamatoran'ilay firenena” rehefa ireo olana momba ny volonkoditra no resahana, saingy koa nanosoka hevitra hoe mbola lalina lavitra noho izany ny oana, ao anatin'ilay rafitra mihitsy, no sady nanosoka hevitra hoe ny hafatry ny praiminisitra dia tokony ho hafatra mandrisika ny vahoaka handinika izay fomba mahatonga ny fanavakavahana ara-drafitra hitohy hatrany ho lasa hery iray maneritery
Nizara ny zavatra nosaintsaininy ihany koa ireo mpampiasa media sôsialy. Tao anaty hafatra ho an'ny rehetra, ilay mpampiasa Facebook, Adrian Raymond, nilaza hoe:
Amin'ity anio ity, tsarovantsika sy ankalazaintsika ny fahafahan'ireo razambentsika tamin'ny ziogan'ny fanandevozana ara-batana.
Androany, andian-taranaka maro taty aoriana, isika taranaka [indrisy] andevo manohy miady amin'ireo lova navelan'ny fanjanahana.
Lova izay mivoatra sy maharitra vokatr'ireo fitsaratsaram-poana: tsy olondia isika, tsy mahery setra, tsy jiolahy mpijirika, tsy jiolahimboto na dahalo. Mpitarika isika, mpisaina fanavaozana, mpijery lavitra, filôzôfa. Isika no Obama, Garvey, Marley, Angelou, Walcott. […]
Ndeha hoekentsika fa ny fandokolokoana dia fitaovana iray nolovaina nentina hizarazaràna antsika […]
Ndao takiantsika ny politikan'ny fifanajàna: kolontsaina iray fanatsatsoana; atsahatra ny fanamaivanana ny mainty hoditra mba hahatonga azy ho mendri-kaja eo anatrehan'ny rehetra […] Ndeha isika hankalaza ny nahitàna indray ny fitokiana sy ny finoantsika ny rafitra. Nesorin-dry zareo tamin'ireo razambentsika ny finoana, nesoriny ny finoana ny rafitra sy ny fahatsapana ny soatoavina. Ao anatin'ny tontolon'ny fampitambaovao ankehitriny, tsy maitsy trandrahanao ireo rafitra maron'ny finoana nananan'ny razambentsika, ny fanajàna ny Ntaolo sy ny zokiolona, ny fitompoana ny fihetsika nataon'ny tena […] ary fametrahana tsindrimpeo amin'ny safidy sy izay ho vokany, misy finoana ao anatin'ny ankohonana, ny fianakaviambe, ny vohitra, ary ny vondrom-piarahamonina.
Fonosin'io fahafahana io daholo ny fahafenoana sy ny harena maha-ianao anao, ny niavianao, ny rà sy ny tantara mikoriana ao anatinao. Itompoy amim-pireharehàna ny maha-ianao anao, ny kolontsainao, ny mari-pamantarana anao.